eSports နဲ့ AAA ဂိမ်းတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ROG Strix G
2B . 1 month ago
ဘာစီလိုနာအသင်းကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ဘီလ်ဘာအို
ဆမ်မာမီး မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းရလဒ်ကောင်း ရယူနိုင်မလား
ခံစစ်ပိုင်း ခြေစွမ်းပြမှုကြောင့် ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲရရှိခဲ့တဲ့ မန်ယူ
ခြေစွမ်းပိုင်း အားနည်းချက်တွေရှိပေမယ့် လိုအပ်တဲ့ နိုင်ပွဲရယူခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်
Harry Kane ရဲ့ နောက်ကျသွင်းဂိုးတွေနဲ့ ဗီလာကို အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ စပါး
၀က်စ်ဟမ်းကို ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူပြီး အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်လိုက်တဲ့ မန်စီးတီး
ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီသစ်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ်
ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့ လီဗာပူးလ်ကို အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး
မထင်မှတ်တဲ့ ရလဒ်တစ်ခုထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ မက်ဒရစ်ဒါဘီပွဲစဉ်
by Ko Kyue .4weeks ago
၂၀၁၉ အာဖရိကနိုင်ငံများဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ အယ်လ်ဂျီးရီးယား
by Ko Kyue . 1 month ago
ကိုပါအမေရိကဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ အိမ်ရှင်ဘရာဇီးလ်